Accueil > Gazetin'ny nosy > Governemanta Ntsay Christian : Voadaka ambavafo tany Rosia indray
Governemanta Ntsay Christian : Voadaka ambavafo tany Rosia indray
Notontosaina tany Sochi any Rosia ny 1 ka hatramin’ny 5 Oktobra teo ny fivoriana andiany faha-70 teo anivon’ny Komity maharitra manara-maso ny fifanarahana eo anivon’ny varotra iraisam-pirenena momba ny harena voajanahary toy ny zava-maniry sy ny biby izay ahiana ho lany maingana na ny “Cites”.
Tamin’io fivoriana io no nanoloran’ny fitondram-panjakana Malagasy, tamin’ny alalan’ny minisitry ny Harena ankibon’ny tany, Randriantefiarison Guillaume, sy ny mpitahiry ny fitombokasem-panjakana sady minisitra ny Fitsarana, Rtoa Norovololona Harimisa, tolo-kevitra mangataka ny fankatoavana ny fametrahana rafitra hanamarina sy hampivoitra tetik’asa fampivoarana na “business plan” mba hahombiazan’ny fitantanana an’ireo hazo saro-bidy voatahiry (stock) amin’ny andramena sy ny mitovy lenta aminy toy ny “bois d’ébène”.
Tao anatin’io fivoriana io moa dia avy hatrany, nanomeny heviny, izay zary nitsipaka an’io tolo-kevitry ny governemanta Malagasy io ny “Cites” ka niangavy ny fitondrana Malagasy hitady vahaolana hafa noho izany.
Ny isan’ny tsy eken’ny “Cites” ao anatin’io tolo-kevitry ny governemanta Malagasy io mantsy dia ny hanomezana onitra (indemnisation) ho an’ireo mitana na mitahiry andramena sy hazo sarobidy. Ny antony moa dia hoe “satria ny didin’ny fanjakana no tsy nahafahan’ireny olona manana andramena sy hazo sarobidy mivarotra ny fananany ireny ka tokony hisitraka onitra izy ireny amin’izany”.
Dia tsaroan’ny mpanara-maso ny raharaha manodidina ny tontolo iainana, indrindra fa ny momba itony harena voajanahary ahiana ho lany tamingana itony ny valan-dresaka nataon’ny “Alliance Voahary Gasy” sy ny “Transparency International Madagascar”, tamin’ny fiandohan’ity volana ity, izay nanamarika fa “endriky ny tsy fahombiazana indray ka niteraka fahafaham-baraka ho an’ny fitondram-panjakana malagasy iny tolo-kevitra voatsipaka ambavafo tany Rosia iny.”
Tsy tokony hadinoina fa efa natolotry ny fitondram-panjakana Malagasy tamin’ny fivoriana iraisam-pirenena tatsy Afrika atsimo tamin’ny taon-dasa io tolo-kevitra voadaka ambavafo tamin’ny fivoriana tany Rosia ity io.
Voalaza mihitsy moa tany Rosia fa “hita taratra ny tsy fananan’ny governemanta Malagasy finiavana pôlitika mba hampitsahatra ny fanondranana ireny hazo sarobidy arovana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena toa ny andramena ireny.”
Voalaza mantsy, araka ny fanamarihan’ny mpanara-maso fa “mahagaga ihany ny tsy ahombiazan’ny fitondram-panjakana mampahomby izany fanondranana andramena izany nefa ny rafitra sy ny pitsopitsony rehetra takian’ny lalàna 2015-056, toy ny “Pôles Anti-Corruption”, ny “Fitsarana manokana momba ny fanondranaa hazo sarobidy… dia efa mijoro sy miasa, fa ny finiavan’ny governemanta no poaka aty.” Tsy mahagaga izany, hoy ihany ny fanamarihan’ny mpanara-maso satria ny governemanta Ntsay Christian ange ka ifarimbonan’ny antoko pôlitika tarihin’ireo telo lahy efa nitantana firenena izay naome alalana ny fanondranana andramena teto.
Mahamenatra sy maharary toy ny vay an-kandrina ange izany e! Sao tokoa ka ireo mpanondrana an-tsokosoko andramena indray no tetehin’ny governemanta Ntsay Christian homen’ny fanjakana onitra sy fanampiana, satria hoe tsy afaka nivarotra na naondrana an’ireo tahirin’andramena ao aminy.
Marihina fa dingana telo no takian’ny rafitra natao hiaro ny harena voajanahary ahiana ho lany tamingana toy ny andramena, mba hajaina amin’ny fiarovana azy ireny sy hanisana azy ka hanamora ny fanaraha-maso azy ireny. Eo ny fanisana sy fanomezana marika ireny andramena ireny, ny fananganana rafitra hikarakara azy ka hanondranana azy ara-pomba ofisialy, ary ny fijerena manokana ny fandaharam-potoana handraharahana azy ireny ara-pahamarinana sy araka nyfepetra takian’ny lalàna.